Wararka - Guryaha iyo isticmaalka budada dib loo arki karo
Tilmaamaha iyo adeegsiga budada dib loo isticmaali karo
Guryaha iyo adeegsiga budada dib loo arki karo
Budada dib loo isticmaali karo
Budada latex ee aan la adeegsan karin waa kala firidhsan budo ka sameysan oo emmerion polymer ah oo la beddelay iyada oo la buufiyo. Waxay leedahay kala firidhid wanaagsan waxayna dib ugu noqon kartaa emulsion xasilan oo deggan kadib markay biyo ku darto. Waxqabadka wuxuu la mid yahay emulsion-ka bilowga ah. Sidaa darteed, waxay noqoneysaa suurtagal in la soo saaro madaafiic tayo sare leh oo qasan oo isku qasan, taas oo markaa lagu hagaajinayo astaamaha madaafiicda.
Budada dib-u-soo-kabashada ee budada ah ayaa ah mid muhiim u ah uguna muhiimsan ee waxqabadka lagu daro madaafiicda. Waxay hagaajin kartaa waxqabadka madaafiicda, waxay kordhin kartaa xoogga madaafiicda, waxay hagaajin kartaa isku xidhka madaafiicda maadooyinka kala geddisan, waxayna hagaajin kartaa dabacsanaanta iyo kala-beddelka madaafiicda Resistance, xoogga cadaadiska, awoodda is-bedbeddelka, adkeysiga abrasionka, adkaanta, xajinta iyo awoodda haynta biyaha , karti shaqo. Intaas waxaa sii dheer, budada cinjirka ah ee leh sifooyinka hydrophobic waxay ka dhigi kartaa hoobiye si aan biyuhu u baahnayn.
Jaantus 1 waa jaantus ku jira budada cinjir dib loo isticmaali karo.
Budada casaanka ah ee dib loodaadin karo madaafiicda birta ah iyo hoobiye malaasyada ayaa leh awood la'aan wanaagsan, haynta biyaha iyo qaboojinta iska caabinta, iyo xoog isku xirnaanta, taas oo si wax ku ool ah u xalin karta tayada dildilaaca iyo soo dhexgalida ee ku jirta hoobiye dhaqameed dhaqameed. dhibaato.
Madaafiic is-dheellitir ah iyo walxaha dabaqa ah Dib-u-daweynta budada latex waxay leedahay awood sare, isku-xirnaan / isku dheelitirnaan wanaagsan iyo dabacsanaan loo baahan yahay. Waxay hagaajin kartaa adhesion, iska caabinta xoqida iyo haynta biyaha ee qalabka. Waxay keeni kartaa hadal-celin heer sare ah, shaqeynta iyo waxqabadka is-nadiifinta ee ugu wanaagsan dabaqa is-le'eg isbarbar dhigga iyo qashinka.
Koolada dhogorta leh, wakiilka isku duubida lakabka Daawada budada ah ee loo yaqaan 'Redispersible latex' waxay leedahay isku dhejis wanaagsan, haynta biyaha oo wanaagsan, waqti furan oo furan, dabacsanaan, iska caabin sag ah iyo caabbinta barafowga-dhalaalka wanaagsan. Waxay u keeni kartaa isku dhejin dhaadheer, iska caabin sarreysa iyo waxqabadka wanaagsan ee guluubka taayirrada leh, xarkaha xajiinka ah ee lakabka khafiifka ah iyo garka isku-darka.
Mashiinka biyaha aan la karin karin ee budada latex-ka ah wuxuu xoojiyaa isku-xidhka dhammaan substrates, wuxuu yareeyaa habka laastikada, wuxuu kordhiyaa haynta biyaha, wuxuu yareeyaa biyaha dhexdooda, wuxuuna siiyaa alaab leh dabacsanaan sare, iska caabin cimilo iyo biyo diida sare Biyo-la’aanta iyo iska caabbinta biyaha waxay u baahan yihiin saameyn muddo dheer socota. nidaamka shaabadaynta.
Darbiga bannaanka ee gidaarka dahaarka dibedda Red budada emulsion budada ah ee nidaamka kuleylka dibedda dibedda waxay sare u qaadeysaa isku xirnaanta madaafiicda iyo xoogga ku xiraya guddiga dahaadhka kuleylka, si aad u raadsato ningax una yareeyso isticmaalka tamarta. Si aad u gaadho ku shaqaysiga lagama maarmaanka ah, xoogga dabacsanaanta iyo dabacsanaanta alaabada xaydha derbiga bannaanka, waxaad ka dhigi kartaa alaabooyinkaaga madaafiicda inay leeyihiin wax-qabad wanaagsan oo taxane ah oo ay ka kooban yihiin agabyada is-gaadhsiinta iyo salka. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale ka caawineysaa hagaajinta caabbinta saameynta iyo iska caabbinta dusha sare.
Jaantus 2 waa jaantus ku jira budada cinjirka dib loo isticmaali karo.
Dayactirka Mashiinka Dib-u-Kala-beddelka budada latex wuxuu leeyahay dabacsanaanta loo baahan yahay, hoos u dhaca, isku-xirnaanta sare, ku habboon dabacsanaanta iyo jilicsanaanta. Samee madaafiic dayactir ah oo buuxisa shuruudaha kor ku xusan ee dayactirka shubka qaabdhismeedka iyo qaabdhismeedka.
Moodda looxaanta ah ee loosoo celin karo budada latex waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dusha sare ee la taaban karo, laxiriira alwaaxyada, leben ciid iyo liin duulis ah. Dillaaca, diirka, iwm. Waxay adkeysi ka dhigaysaa mid adag, ma fududa in la soo dhaco iyo adkaysiga biyaha, iyo caabbinta qaboojinta-qaboojinta. Waxay ku leedahay saameyn weyn howlgalka fudud, dhismaha ku habboon.
Waxyaabaha budada ah ee aan la soo iibsan karin waa ku badan yihiin suuqa, laakiin dhismahooda aasaasiga waa isku mid. Waxaa si kooban loogu soo koobi karaa sidan soo socota:
Budada dib loo soo celin karo waa budo ay sameysantay buufin qalajiyaha polymer emulsion, sidoo kale loo yaqaan caag budada qalalan. Budada Tani si dhakhso ah ayaa loo yareyn karaa emulsion ka dib markay la xiriirto biyo, waxayna haysaa astaamo la mid ah emulsion-kii asalka ahaa, taasi waa, filim ayaa la sameyn doonaa ka dib marka biyuhu ka baxaan. Filimkani wuxuu leeyahay dabacsanaan sare, iska caabin cimilo sare iyo iska caabin wanaagsan oo ku timaada substrates kala duwan. Khadadka isku xidhka oo sarreeya.
Nooca noocan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa goobaha dhismaha sida dahaarka derbiga dibedda, isku xidhka lebbiska, daaweynta isku xidhka, malaasyada isku xidhan, nuuradda stucco, dhismaha gudaha iyo dibedda putty, hoobiye lagu qurxiyo, iwm. Waxay leedahay codsiyo aad u ballaadhan oo wanaagsan rajada suuqa.
Dhiirrigelinta iyo adeegsiga budada latex ee dib loo dareemi karo waxay si weyn u wanaajisay waxqabadka qalabka dhismaha ee soo jireenka ah, waxay si weyn u hagaajisay isku-xirnaanta, wada-noolaanshaha, xoogga dabacsanaanta, caabbinta saameynta, iska caabinta abrasion, adkeysiga, iwm. Samee alaabta dhismaha tayo wanaagsan iyo tiknoolajiyad sare si aad u hubiso tayada mashaariicda dhismaha.
Waqtiga dhejinta: Jun-08-2019